Malezia: siokantsera momba ilay mpanondraka asidra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Mey 2011 10:24 GMT
Nirotsaka nanerana ny valan-tserasera tany Malezia izao hafatra izao andro maromaro lasa izay:
@MelordeLicious:RT @DianaDanielleB: “@nourishamy: am-pandehanana [fiara na môtô] ny mpanondraka asidra, laharana MAC1841 n WPV4963…FANAIRANA!!! Aelezo ny hafatra.. -“
Saingy tsaho tsy marina niparitaka ihany izany hoy ny polisy. Nefa misy tokoa ny fanafihana amin'ny alalan'ny asidra. Ny zavamisy moa dia efa mihoatra ny 20 ny trangana fanondrahana asidra nisy tao Kuala Lumpur hatramin'ny volana marsa.
Mihoatra ny 20 ny trangana fanondrahana asidra nisy tao Kuala Lumpur hatramin'ny volana marsa. sary avy amin'ny mpisera Flickr maticulous (CC BY 2.0).
Nampanahy ny mponina maro ny raharaha ka nahatonga ny minisiteran'ny fahasalamana hanambara fa arahi-maso ny famarotana ny fangaro mora mamotika tahaka ny asidra. Niditra amin'ny famahana olana ihany koa moa governemanta.
Indreto misy hevitra miposaka avy amin'ny siokantsera:
Manantena aho fa ho voasambotra ilay adala mpanondraka asidra iny. Lasa katahotra fadiranovana mihitsy aho rehefa mandeha irery ka misy mpitondra moto misongona ahy.
@kamraslan rahoviana no ho voasambotra ilay mpanondraka asidra? mpitondra moto manondraka asidra no atahorantsika eto Malezia fa tsy ny Al-Qaeda.
Vao tonga avy any an-tsekoly ary inona no ijanonan'ny polisy eo amin'ny fiantsonan'ny fiara fitaterana? Mieritreritra aho hoe miandry ilay mpanondraka asidra ho avy?
@ASTOROBREAK ny tena ahiahiko izao dia ny fomba nahazoan'ilay mpanondraka ny asidra tamin'ny fomba mora dia mora tokoa…
RT @sheerakhairudin: Tafandria mandry ry tontolo. Rahampitso aho manana olona harovana, firenena vonjena (?) ary mpanondraka asidra hidifiana.
Mieritreritra aho fa resaka politika no anaovan'ity mpanaondraka asidra ity ny ataony. Azonao eritreretina ve hoe tsy mety voasambotry ny polisy ranamana nefa efa maro ny porofo?
RT @xuriatee: inona moa no antony hanondrahanao asidra amin'ny vehivavy sendra hitanao eny an'arabe? Taraiky be ianao izany.
Tena tsy mino aho hoe misy olona tsy mahalala mihitsy ity resaka fanondrahana asidra ity. Tahaka ny olomboafidy. Miaina ambany vato angaha?
Nanome hevitra amin'ny fomba isamborana ilay meloka i Syed Akbar Ali:
Tsy vao sambany raha nihoatra ny iray olona niharam-pahavoazana ao anatina fotoana iray. Ny eritreretiko ho antony dia mety mividy ilay asidra any ho any ileiry dia taperiny ao anatin'ny indray andro ny iray fehezana. Izay no isian'ny fanafihana maromaro. Tsy manana toerana itehirizana ny asidra izy ary tsy te-hitondra asidra any an-trano. Raha hitan'ny polisy ny misy ny asidra sy ny mpanome dia mety ho hitany ny misy ilay meloka.
LvLiaety Rose nampanako ny eriteritry ny mponina maro eto an-tanàna
Fa inona ny antony hanaovany io e? valifaty amin'ny sipa? Tsy azo ekena mihitsy izao na inona antony na inona! Mendrika ny hofaizina mitovy amin'izay rehetra nanondrahany asidra rehetra izy
Tekkaus indray manontany teny amin'izay mahatonga ny polisy ho miadam-pandeha amin'ny fisamborana ilay ‘ingahy asidra’
Manontany tena aho hoe ahoana ny ahafahan'ity olona adala ity mandehandeha malalaka eny an'arabe? Inona moa no ataon'ireto polisy manao kolikoly ireto mitsiriritra tamana manafika tranon-dopy sy fanaovana masazy ary misambotra ny mpivaro-tena eo am-panaovana ny asany?